Airedale Terrier - Ihe ichoro na nkita nkita a - Dịrị
Airedale Terrier - Ihe ichoro na nkita nkita a
Airedales na-eme nke ọma na nri nkịta dị elu.
Ndagwurugwu Aire na West Riding, Yorkshire, bụ ebe amụrụ nke Airedale Terrier. A maghị ụbọchị ahụ kpọmkwem mana ihe na-egosi bụ na a malitere ịzụlite ụdị a na etiti narị afọ nke iri na itoolu. A zụrụ ha dịka azịza nye ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-achọ ịchụ nta otter. Huntchụ nta egwuregwu a n'ụzọ kwesịrị ekwesị chọrọ mkpọ Otterhounds na 'Terrier' ma ọ bụ abụọ.
Ekwenyere na Airedale bụ 'Old English Black-and-Tan Terrier,' 'Terrier na-arụ ọrụ Broken' na 'Rough-coated Black-and Tan Terrier' gafere Otter Hound n'etiti ndị ọzọ. Ihe ndekọ niile nke 'okike' nke isi ruo obe nwere ike ịnwe oke Border Collie ma ọ bụ ụfọdụ atụrụ atụrụ ọzọ. Accountsfọdụ akụkọ na-arụtụ aka na Bull Terrier, ebe ndị ọzọ na-ekwusi ike na ọpụpụ a enweghị mgbe ọ bụla.
A maara nkịta ndị a maka ikike dị ike ha nwere megide onye iro ọ bụla ma nye ezigbo akụkọ banyere onwe ha. A gbajiri ha egbe ma zụọ ha ka ha weghachite. Ha bụ ndị asọmpi na-ekpo ọkụ na asọmpi mmiri-oke.
Albert Payson Terhune chịkọtara Airedale n'ụzọ dị nkenke: 'N'etiti olulu ndị dị na Aire, ìgwè dị iche iche nke ndị na-egwuputa ihe na nke ọ bụla chọrọ ịzụlite nkịta nke nwere ike ịpụ apụ na ịpụ na OUTTHINK nkịta nke onye ọzọ. Site na nyocha ndị ahụ wee pụta Airedale nke oge a. Ọ dị ọsọ ọsọ, na-emenye ụjọ, na-amara amara, nnukwu ụbụrụ, ezigbo chum na nche. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla a na-apụghị ịkụziri ya ma ọ bụrụ na onye na-enye ya ọzụzụ nwere obere onyinye nkuzi. Ọ bụla inch nke ya bụ na ojiji. Enweghị ngwaahịa site na ngwaahịa. igwe zuru oke- igwe nwere ụbụrụ, gbakwunyere. ”
Onye mbụ Airedale mara amara ịbịa America bụ C.H Mason wetara Bruce. Bruce bụ oke nke Bess, onye bụ mmiri nke Airedale Jerry, mgbọrọgwụ nke osisi ezinụlọ.
Airedales nwere ihe ịga nke ọma mụtara ihe niile site n'ịchụ nta egwuregwu, ịchụ nta, ịbụ ezigbo ndị nkịta ndị uwe ojii na nrube isi na-arụ ọrụ. Ọ bụghị Airedale ọ bụla kachasị mma na mpaghara ọ bụla, mana oge na-aga, ọtụtụ emeela ọrụ dị iche iche nke ọma.
Taa Airedales ka eji dị ka nkịta ịchụ nta, nkịta na-eche nche, na ọbụna nrube isi na nkịta na-eme mkpọtụ, mana ha bụ, nke mbụ, ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị na-eguzosi ike n'ihe na ndị ọbịa.
Airedales na-eme nke ọma na nri dị elu. Fọdụ nwere ike nwee ntakịrị nkụ “acha ọkọ” ma nwee ike ịgbakwunye ụfọdụ mmanụ na kelp. Ọtụtụ Airedales na-azakwa nke ọma maka nri atụrụ na osikapa.
Otu ihe kwesiri ekwusi ebe a bụ ogologo oge iji nye nri nkịta. Researchfọdụ nnyocha na-egosi na inye nwa nkịta nri maka ogologo oge nwere ike ime ka nsogbu dysplasia hip dị na nkịta nwere ike ịta ahụhụ. Ozizi a bụ na pasent dị elu nke protein a hụrụ na usoro nkịta nwere ike mee ka uto dịkwuo elu tupu ọkpụkpụ na-eto eto nwere ike ịkwado ibu ahụ. Fọdụ ndị na-azụ ihe na-amalite inye nri ndị okenye ngwa ngwa. Imirikiti ndị mmadụ na-eji nwayọọ nwayọọ gbanwee nri ndị okenye na ọnwa 8-10. Ọzọ, nke a bụ ihe iji tụlee ya na onye na-azụ ya na dọkịta gị.
Ọtụtụ anụ ụlọ Airedales na-adaba na njirimara King of Terriers. Ezigbo onye na-edozi ụlọ kwesịrị inwe ike ịrụ ọrụ a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, kpọtụrụ onye na-azụ ihe n'ógbè gị, ọtụtụ ga-adị njikere inye aka maka oke aka. Ekwesịrị iji ahịhịa ahịhịa na-ehicha kwa ụbọchị iji wepụ ntutu isi nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ na ha “awaghị.” Ichapu akwa ha (ntutu ụkwụ na ntutu ihu) ga-ewepụ ntutu nwụrụ anwụ, na-ekwe ka ntutu ọhụrụ tolite.
Airedales “na-afụ” uwe ha ma ọ bụrụ na ahapụ ya ka ọ topụta.
Nkịta ndị a ga-egosi na-emepụsị ma chajie. A kọwara nke a n'ime akwụkwọ ole na ole na njedebe nke Ajụjụ a. Ọ bụ oge na-ewe oge na-esikwa ike nghọta.
Airedales na-ahọrọ ịnọnyere ezinụlọ ha kamakwa ọ na-amasị romp na igwu egwu. Mpaghara gbara ogige dị mma maka mmega ahụ na egwuregwu, mgbe ha gwụchara, ha dị njikere ịme nkịta ụlọ.
Airedales bụ ndị hụrụ egwu ala. O doro anya na ha bụ “ndị na-atụ ụjọ.” Buru nke ahụ n'uche mgbe ị na-akwadebe ebe mgbatị ahụ.
Ọzụzụ crate bụ ezigbo echiche maka nkịta na-eto eto. Ka ọ na-emewanye okenye, ọ nwere ike iji nke a dị ka 'ụlọ' ya ma nwee ebe nchekwa maka njem ma ọ bụ ogologo ụbọchị gị na-arụ ọrụ.
Airedales bụ nkịta na-arụsi ọrụ ike ma chọọ ọtụtụ mmega ahụ. Ha choro nnukwu uzo buru ibu ka ha na egwu. Walksgagharị kwa ụbọchị bụ mmega ahụ dị mma na oge ntụrụndụ maka gị na Airedale gị.
Airedales nwere ike bụrụ 'nkịta na-eme ihe ike,' nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nrube isi bụrụ ihe kwesịrị.
Dika umu anumanu ndi ozo, bido imekorita Airedale gi site na nwata. Mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-ebido ịtọ ntọala maka onye nwere obi ụtọ ma na-erube isi site na ịbawanye obi nkịta. Airedales nwere ike bụrụ 'nkịta na-eme ihe ike,' nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nrube isi bụrụ ihe kwesịrị. Nkịta gị ga-asọpụrụ gị mana ị ga-enweta nkwanye ùgwù ahụ. Nwa nkita gi choro usoro nke ichoro ibi ndu. Dịka ọmụmaatụ, a ga-ahapụ ya ka ọ dina n'ihe ndina ka ọ bụ? Iwu ndị na-agbanwe agbanwe ga-eweta ezigbo enyi. Nwa nkita, ma ọ bụrụ na ọ dị, bụ ezigbo echiche.
Airedales anaghị anabata usoro ọzụzụ siri ike. Ha chọrọ ime gị obi ụtọ, mana ha kwesịrị ịghọta ihe a na-atụ anya ha.
Ọtụtụ ihe ngosi maka ọzụzụ ịga nke ọma bụ:
Emela nkịta gị. Airedales agaghị abụ “ígwè ọrụ”. Ọ ga-aga lelee ihe nlere na-atọ ụtọ tupu ịmeghachi otu usoro nzuzu 'nzuzu' ugboro ugboro.
Cheta na Airedales bụ 'ndị na-eche echiche.' Ajula ha ka ha mee nzuzu. Naanị mgbe nwatakịrị nwanyị m ochie dara ada bụ n'ihi na 'onye ọka ikpe' bụ onye nzuzu iji dobe nkịta na anyanwụ ka onye ọka ikpe nwee ike iguzo na ndò n'ehihie July na-ekpo ọkụ.
Jiri mkpali di nma. Ọ baghị uru ka nzuzu ị na-eche, ọ ga-adị ka ọ na-eme gị obi ụtọ. Nwee ihe. Cheta, Airedales bụ ndị na-eche echiche, ọ bụghị robot.
Bịaruo oge ọzụzụ ọ bụla dị ka ohere iji mụtakwuo banyere onye gị na ya ga-anọ. Gbalịa ile iwu ọ bụla anya site na nkịta gị. Wayzọ a si eche echiche ga-eme ka nkwanye ùgwù dị n'etiti ibe ya kwesịrị ịmalite n'oge ọzụzụ.
Mee ka o nwekwuo ohere iji nwee ihe ịga nke ọma site na isoro ndị nwere ekele maka nghọta mara ihe. Ekwekwala ka onye nkuzi nrube isi obula ma obu onye obula jiri Airedale gi tunyere ebe nchekwa, oke na GSD. Anurum akuko banyere nwanyi na aru oru Airedale na akwukwo nrube isi nke onye nkuzi Border Collie kuziri. N'ime otu klaasị, ha na-arụ ọrụ na heeling usoro. Onye nkuzi ahụ nọ na-arụtụ aka na-egosiputa enweghị ike Airedale ịgbaso ụkpụrụ ahụ ka onye nkuzi na Border Collie na-ada ma wụtuo ebe Airedale na-ele site na ịnọdụ ala zuru oke n'ihu nmali ahụ. Onye ahụ “na-enweghị nzuzu” na-amụmụọ ọnụ ọchị.
Ikwesiri igbanwe mgbanwe na iku Airedale gi. Na-atụ anya ihe a na-atụghị anya ya ma mara onye gị na ya nọ. Anwala itinye peg square n'ime oghere gbara gburugburu. Ọ bụ nkwenye zuru oke na enweghị ike ịzụ Airedales. Airedales chọrọ ndị ọkachamara ọzọ na ndị nwere ndidi karị.
Chọọ onye na-azụ azụ aha ọma mgbe ị na-ahọta nwa nkịta Airedale. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, gaa n'ụlọ nke nwa nkịta gị nwere ike ịzụ. Cheta na izu 8 izizi nke ndụ nkịta ọ bụla dị ezigbo mkpa. Akwa nkịta / ihe nkịta na-amalite mgbe amụrụ ya.
Mee ndepụta ajụjụ tupu ị gwa ma ọ bụ gaa na onye na-azụ ya. Lelee nkịta nkịta ahụ. Olee ihe ụmụ nkịta na-eme gbasara ndị na-azụ ya? Olee otú ha si emeghachi omume na gị? Ebe ha dị ọcha? Jụọ onye na-azụ ya ma ọ bụrụ na-enyochala ndị mụrụ ya maka dysplasia? Enwere ezinụlọ akụkọ banyere allergies? Themụ nkịta ahụ etinyere ụmụaka? Ha agaala nwamba? Ndi breed ga-enwe ohere ịza ajụjụ n'ọdịnihu? Ndị na-azụ ihe na-enye nkwekọrịta?
Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume maka onye na-azụ ya iji kwenye na ahụike nke anụmanụ ọ bụla, mana onye na-azụ ya kwesịrị ịdị njikere iweghachi anụmanụ ahụ ma dochie ya! Ndị na-azụ azụ na-azụ ahịa ga-achọkarị ka a kpọghachite anụmanụ ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara ya, ị nweghị ike idebe anụmanụ ahụ. Nke a na-eme ka ha jide n’aka na a ga-elekọta anụmanụ ahụ n’ọdịnihu. Kedu ọgwụ mgbochi ndị e nyere? Ekpuru ụmụ nkịta ahụ? (ebe dị iche iche chọrọ ọkwa dị iche iche nke ikpuru, n'ihi ihu igwe.) Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ụfọdụ ajụjụ ị kwesịrị ịjụ.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, gaa lee ọtụtụ litters ma gwa ọtụtụ ndị na-azụ ihe.
Cheta na ị na-ahọta onye enyi gị ọtụtụ afọ na-abịa, ya mere wepụta oge gị, jide n'aka na ị na-ahọrọ ọ bụghị naanị ụdị dakọtara, kamakwa anụmanụ na ndị na-arụ ọrụ dakọtara !! Na-atụ anya ọtụtụ ajụjụ n'aka onye na-azụ gị. Ọ na - ahọpụtakwa enyi maka anụmanụ nke etinyegoro ọtụtụ oge nke ịhụnanya, echiche na ume.
Mgbe ị buliri nwa nkịta gị, onye na-azụ gị nwere ike ịgwa gị oge nwa nkita ahụ, ụdị nri ma nwee ike ịkwado nri ị ga-eri n'ọdịnihu. Mgbe ahụ ị nwere ike jiri nwayọ gbanwee nri gị ka ọ masịrị gị. Cheta na mgbanwe na mberede na nri nwere ike imebi ngwa nri nwa nkịta ma kpatara nsogbu nke afọ. Airedale nwere ike iri obere obere, ọkachasị dị ka nkịta na-eto eto.
Maka ama ndi ozo banyere imuta ka gi na nwa nkita gi biri, lee RPD FAQ nke isiokwu ya bu “Nwa nkita ohuru gi” nke Cindy Moore dere.
Cheta n'ọtụtụ ọnọdụ, nkịta toro eto nwere ike dabara n'ọnọdụ gị nke ọma karịa nkịta na-eto eto. Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na-etinye ụmụ nkịta na nkịta ndị toro eto. Nkịta ndị a na-abụkarị “ngosipụta atụmanya” nke na-etozughi dịka e siri tụọ anya ya ma ọ bụ enwere ike ịlaghachi na onye na-azụ ya maka ebumnuche dị iche iche. (Ahụmahụ m onwe m na ịnara nkịta meworo okenye enweela ezigbo ihe ịga nke ọma.) Otu nnapụta ụdị nnapụta ọ bụla na-achọ ezigbo ụlọ nnabata. Nkịta nnapụta na-achọkarị ọrụ ọzọ mana ọ nwekwara ike ịba ezigbo uru.
Ọ bụrụ na ị na-atụle nkịta nkịta ma ọ bụ nkịta meworo okenye, biko gụọ RPD FAQ nke isiokwu ya bụ 'Nkịta Ọhụrụ Gị' nke Cindy Moore dekwara, maka ozi ndị ọzọ.
Cheta na Airedales na ndị ọzọ na-atụ egwu bụ nkịta nwere ọgụgụ isi ma dịkwa mma. Ha abụghị nkịta ndị a ga-ahapụ maka atụmatụ ha. Amamihe ha nwere ike iju gị anya. Onye Airedale a zụrụ azụ nwere ike ịbụ ezigbo enyi ị ga-enwe. Nọgidenụ na-ahụ ọchị na a na-agbanwe agbanwe set nke iwu gị nkịta, na ị ga-utịp na a enyi enweghị atụ. Ghaghi ịbụ onye maara ihe, onye nwere ndidi na onye na-ekwusi okwu ike dịka enyi ị na-ahọrọ.
Ahụike Ọha na Ahụike Ọpụrụiche
Airedales, n’ozuzu ya, nwere ezigbo anụ na anụ siri ike. Fọdụ nwere nsogbu ahụ ike, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ndị a pere mpe.
Airedales, dị ka ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ buru ibu, nwere ọnọdụ nke dysplasia hip. Ndị a abụghị ndị nkịtị mana enwere ike ilebara ya anya. Mgbe ị na-ahọrọ nwa nkita, jụọ onye na-azụ ya ajụjụ mgbe niile banyere ọnọdụ hips nne na nna. Ọtụtụ ndị na-azụ ihe nwere mbido x-ray nke emere na otu afọ (ụzarị ọkụ ndị a enweghị ike izipu maka ọnụọgụ OFA), tupu ịmalite ọrụ 'ihe ngosi'.
Airedales, dị ka ọtụtụ ndị na-atụ ụjọ, nwere ike ịnwe akpụkpọ anụ 'acha'. Nke a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ọtụtụ ihe. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe ọ bụla karịa nsogbu nri, na mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe mgbaàmà nke hyperthyroidism ma ọ bụ hypothyroidism. Ihe niile dị n'elu ga-ejikarị gwọọ ma chịkwaa ngwa ngwa. Akpụkpọ anụ 'Itchy' nwekwara ike bụrụ mgbaàmà nke nfụkasị ahụ. Mmetụta ndị a nwere ike ịbụ nri ma ọ bụ ndị ọzọ. Ahụmịhe m bụ na ebe mbụ ịmalite bụ na nri. Afọdụ Airedales na-eme nke ọma karịa nwa atụrụ na osikapa dị mma, ndị ọzọ anaghị eme nke a.
Wepụta oge oge niile iji mee ka ntị Airedale gị dị ọcha ma kpoo (nke a na-enyere aka igbochi ọrịa ma ọ bụ mgbakasị.), Mkpụpụ mkpịsị ụkwụ, ezé ezé (ime nke a n'ụlọ mgbe niile nwere ike igbochi ọrịa chịngọm na nsogbu ezé ndị ọzọ, ọ dịkwa mma omume maka njem na vet.), Ma cheta idobe ntutu isi na nkedo.
Mgbe ịkpọtụrụ gị vetiran soja nwoke na breeder banyere ihe ọ bụla ike na-akpata nsogbu.
Ebee ka m nwere ike ịhụ ndị na-azụ Airedale na mpaghara m?
Iretù Airedale Terrier Club of America na-ekwusi ike ndepụta ndị otu. Ma ọ bụ, lelee otu iretù Nnapụta Airedale
Kedu otu m ga-esi họrọ onye na-azụ ihe? Kedu ihe m ga-atụ anya n'aka onye na-azụ m?
Họrọ onye na-azụ ihe dịka ihe dị mkpa dị ka ịhọrọ ụdị ma ọ bụ nkịta. Kwesịrị ịkpọtụrụ isi mmalite dịka ndị edepụtara n'elu, gaa na nkịta, ma ọ bụ gwa ndị na-anụ ọkụ n'obi na mpaghara ahụ. Gwa ọtụtụ ndị na-azụ ihe dị ka o kwere mee. Ga-ahọrọ onye na-azụ anụ nke dị njikere isoro gị rụọ ọrụ ma nyere gị aka ịhọrọ anụmanụ kwesịrị ekwesị maka gị. Onye na-azụ gị kwesịrị ịjụ gị ajụjụ. Ọ / ya kwesịrị inwe nchegbu banyere ọdịmma nke nkịta a na-etinye n'aka gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịga leta onye na-azụ ya, ị kwesịrị. Ikwesiri ileba anya na mmekorita nke di n'etiti ndi ozo na umu anumanu ya. Ndi mme unam ẹkop inemesịt, ẹse ẹban̄a mmọ, ẹnyụn̄ ẹsana?
Ezigbo onye na-azụ ihe ga-ewetara gị akwụkwọ ndekọ ahụ ike, usoro ọmụmụ na, n'ọtụtụ ọnọdụ, nkwekọrịta. Ọtụtụ n'ime nkwekọrịta ndị a ga-ekwupụta na opekempe na:
anụmanụ ahụ dị ezigbo mma
a ga-edobe anụmanụ ahụ nke ọma na ịgba ọgwụ mgbochi (yana nchegbu ahụike ndị ọzọ lekọtara; ntụgharị obi obi, nje nje, nsị njikwa, wdg)
iwu obodo niile ka a ga-erube
a ga-enyeghachi anụmanụ ahụ n'aka onye na-azụ ya, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara ya, ịnweghị ike ijide nkịta ahụ
a ga-edochi anumanu ahu na ihe nketa ahu ike nke n’adighi ike
A ga-agbachapu ma ọ bụ daa anụ ahụ (ọ gwụla ma enwere nkwekọrịta pụrụ iche; yabụ enwere ike igosi atụmanya)
Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ ga-ere ụmụ nkịta naanị na ndebanye aha na AKC, ma ọ bụrụ na enwere nkwekọrịta pụrụ iche. Onye na-azụ gị kwesịrị ịhapụ onwe ya iji zaa ajụjụ ma gbalịa inye aka dozie nsogbu (ọ bụrụ na ha bilie) n'ọdịnihu. Dị ka e kwuru na 1998 ATCA Roster na Information Booklet, ezigbo ndị na-azụ anụ na-anakwere ibu ọrụ maka nkịta ha mepụtara ma weghachite ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka, nyochaghachi ma debe ha n'ụlọ ọhụrụ kwesịrị ekwesị. Ndị na-arụ ọrụ n'ụdị a na-atụghị anya ha anaghị ebi ndụ dị ka atụmanya ndị a si dị.
Ndebanye aha na-enweghị oke
Ndebanye aha na-enweghị oke, yana AKC, pụtara na e debanyere nkịta ahụ mana enweghị akwụkwọ ọ bụla nkịta mepụtara tozuru oke maka ndebanye aha. Ndebanye aha na-enweghị oke pụtara na nkịta enweghị ike ịbanye na asọmpi agbụrụ na ihe omume ikikere AKC, mana ọ nwere ike ịsọ mpi na mmemme ndị ọzọ nwere ikikere dị ka Nnwale Ule na Nnwale Nrubeisi.
Airedales dị mma na ụmụaka?
Dị ka ọ dị na nkịta niile, a ghaghị ịkụziri ụmụaka na nkịta ka ha na-asọpụrụ ibe ha. A ghaghị ịkụziri ụmụaka na ị takingụ ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ inye nkịta nsogbu mgbe ọ na-eri nri abụghị ezigbo agwa. Ọzọkwa, nkịta kwesịrị ịkụziri ya na ịwụkwasị mmadụ ma ọ bụ 'ịkọ ọnụ' abụghị àgwà ndị a na-anabata. Ezinaụlọ ọ bụla ga - enwe usoro iwu dị iche (nke ekwesiri iji nlezianya tụlee tupu ị nweta nkịta ọ bụla) nke a ga-enyerịrị onye ọ bụla (ndị okenye, ụmụaka, na nkịta ahụ) n'ụzọ doro anya. Site na ọzụzụ na ndidi kwesịrị ekwesị, Airedales dị ebube na ụmụaka toro eto. M, n'onwe m, agaghị ahapụ nwatakịrị na nkịta ọ bụla na-echeghị nche.
Ọ dị mma ịjụ ndụmọdụ nke ọkachamara n'ọzụzụ mgbe ị na-ewebata nkịta gị ụmụ. Ọ dị ezigbo mkpa na nkịta na-ejigide ọnọdụ nke 'nkịta' n'ime ndị isi na-enweghị ibelata mkpa na mkpa nke nkịta ahụ.
Ejiri ogige 'gbara ogige' chọrọ maka inwe Airedale?
Agbanyeghị na ogige agba abụghị ihe achọrọ iji nweta Airedale, ọ bụ nnukwu gbakwunyere! Tupu ị kpọta nkịta n'ụlọ gị, ị kwesịrị ịtụle ihe ị ga-eme n'ụbọchị ị na-arịa ọrịa, na-agba ọsọ n'oge, ma ọ bụ n'ihi ihe ọzọ enweghị ike ịga ije na nkịta ahụ. Ọtụtụ ebe nwere ụfọdụ ụdị iwu mmado na, maka ahụike nke nkịta, ị gaghị ekwe ka nkịta na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu, na-enweghị ụdị oke. Cheta na Airedales zụlitere ịchụ nta na ndị nkịta, n'ozuzu ha, ga-achụ 'ndị okike anụ ọhịa' na-elegharaghị anya ịhapụ maka ọ funụ.
Ọ bụ eziokwu na Airedales dị mma maka ndị nwere ọrịa nfụkasị?
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-asọ nrịanrịa n'ụdị ụfọdụ ndị ọzọ yiri ka ha nwere nsogbu ole na ole ibi na Airedales, eziokwu ahụ bụ na ị nwere allergies abụghị ihe zuru oke iji nweta Airedale. Na-agbakwunye onye otu n’ezinaụlọ gị ma kwesịrị ịtụle ọnọdụ, ogo, usoro iheomume gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbe ị na-ahọrọ anụ ụlọ. Enwere udiri anumanu ndi ozo, (dika ima atu; Poodles) nke bukwara na “adighi ahu anataghi”, nke diri gi na nke gi karie.
Ndi Airedales ndị okenye nwere ike imeghari na gburugburu ọhụụ? Kedu mgbe nnapụta ma ọ bụ nkịta toro eto bụ ezigbo nhọrọ maka m?
Airedales na-agbanwe agbanwe n'ime gburugburu ọhụụ. Dị ka ọtụtụ anụmanụ, ha na-emeghachi omume nke ọma n'ọnọdụ ịhụnanya na nhazi. Nkịta ndị toro eto na-achọkarị ọnọdụ karịa ụmụ nkịta. Otu ihe atụ bụ ezinụlọ ma ọ bụ onye na - achọghị ịba uru na nwa nkịta. Ma eleghị anya, ị dịtụla okenye ma chọọ mkpakọrịta nke nkịta ma ọ bụghị ike nke nwa nkita. Ọ́ bụrụkwanụ na ị bụ jogger ma chọọ onye ọzọ? (Okwesighi ka nwa nkita na-agba oso!) Enwere otutu onodu ebe anụmanụ toro eto nwere ike buru ihe kwesiri ekwesi.
Anụmanụ ndị toro eto nwere ike ịgụnye nnapụta (maka ihe kpatara ya) ma ọ bụ anụmanụ ndị toro eto nke onye na-azụ ihe nwere ike ịchọ itinye ya na ezigbo ụlọ. Mgbe niile na-esi dị ka ukwuu ndabere na anụmanụ dị ka o kwere. Ekwesịrị ịnye ozi ahụike. Ọ bụrụ n’echiche na anụmanụ toro okenye ga-aka gị mma, mgbe ahụ ị ga-atụlerịrị “nzụlite” enwere ike ịdị mkpa. Dabere na ọnọdụ na anụmanụ sitere na nke a nwere ike ịdị iche na mmebi ụlọ ka ịkụziri anụmanụ ahụ na agbanyeghị na ọ dị mma ihi ụra n'ihe ndina ya n'ụlọ ochie, iwu dị ebe a bụ, n'elu akwa nkịta dị n'ihu ekwú ọkụ. Otu onye na-azụ atụrụ na-atụ aro na ụzọ dị mma mgbe gị na anụmanụ meworo okenye ga-esi were ya dị ka nkịta, chee na ọ maghị ihe ọ bụla ma hapụ ya ka ọ nweta nnwere onwe ha.
Ekwesịrị m 'ịzụ-azụ' Airedale m?
N'uche nke m, ọzụzụ nkuzi bụ ihe gbakwunyere. Ekwesighi iji ya dochie anya ịzụ Airedale ka o nwee omume ọma ma bie iwu nke ezinụlọ mana kama dị ka ebe nchekwa dị mma maka anụ ụlọ gị izu ike. Ọ bụkwa ụzọ dị mma maka nkịta gị njem. Achingkụziri nkịta gị na akpa ya bụ ohere ya nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ abịarute, mgbe ọ na-emebi ụlọ, yana ọ bụrụ na anụ ụlọ gị ga-ejedebe maka ahụike. Enweela m nkịta nke gara nnukwu ịwa ahụ ma bụrụ nke a hapụrụ n'ụlọ n'oge, n'ihi na ọ 'na - apụ apụ' na ejidere ya. Ekpebiri m na agaghị m enwe anụmanụ ọzọ na-anaghị azụ azụ.
Kedu ihe kpatara Golden Retriever na-awụfu & otu esi emeso ya
Onye Belgium Onye Ọzụzụ Atụrụ German ga-agwakọta gị nkịta?
onye ọzụzụ atụrụ German na -acha ọcha na agba aja aja
bekee setter German onye ọzụzụ atụrụ mix
ihe nkịta na -abata na brindle
nkịta nkịta pomeranian chihuahua mix
labrador retriever German onye ọzụzụ atụrụ mix ụmụ nkịta